Milestone - Huaihai Holding Boka
Petroli Cargo Mateki
Petroli Inotakura Matangi
Magetsi Etsva Magetsi
Gadzira muna 1976 neXuzhou Liangshankou Vehicle Factory senge yaive yekambani yekare, iyo Huaihai Holding Group ndiyo inonyatso kukodzera mini kambani inogadzira mota mumunda
Kunyoreswa kwe "Huaihai" Brand kwakapupurira nhoroondo yekuvandudza kweChinese Mini Vehicle Viwanda
Kugadzwa kweHaiihai Kubata Boka, Jiangsu Province
Iyo nheyo yemubatanidzwa, Jiangsu Zongshen Kambani. Nekudyara kwakasiyana-siyana kwe ＄ 15,1 miriyoni emadhora kuti ikwane 100% kuvandudza mukukosha uye zvakabuda, zvinoenderana nechishamiso chemaindasitiri.
Iyo Jiangsu Zongshen 2nd yekuvakwa yakatsigirwa ne ＄ 30.3 miriyoni emadhora emari yekudyara kubva muboka kuti riwane 30,0000 pagore seti yekugadzira kugona kwemudhudhudhu uye inoumba yepamusoro kambani simba muindasitiri.
Iine huwandu hwekutengesa huwandu hwepamusoro mumusika wepamhepo, Jiangsu Zongshen Kambani yakava yakakura kugadzira mota triskcle muChina.
Ne ＄ 83,41 mamirioni emadhora mari yekudyara inopa iyo 3rd constrion ye Jiangsu Zongshen, ruzha hwaro hwakavakirwa kuzadzisa miriyoni seti zvigadzirwa zvekubuditsa uye No.1 kambani
Vakanyoreswa seNational Level group Kambani, iyo "Huaihai" yakave mutungamiri uye yakaenzana muindasitiri iyi.
Ne ＄ 15,1 miriyoni yemadhora emari yekudyara yakanangana neJiangsu Zongshen 4th construsction uye tech kuvaka inofukidza 140000 mativi emamita, kambani yakawana chimwe chiitiko chakakosha munhamba yeiyi indasitiri.
Jiangsu Zongshen Electronic & Mechanic Kambani yakavambwa pasi pehukama hwekudyidzana pakati peHongihai Holding Boka uye Zongshen Group seimwe mileage yakakosha mukuvandudza kwepamusoro.
＄ 7.583 miriyoni dollars akaiswa mari yekutanga Jiangsu Huaihai New Energy Vehicle Kambani kuvaka imwe kambani inotungamira muEV indasitiri.
Tianjin Zongshen Kambani yakavambwa iine ＄ 7.583 miriyoni emadhora kuzadzisa akakosha dhizaini mumusika weKiibei, ichigadzira yakakura mini mini gadzira zvigadzirwa munzvimbo ino.
Iine imwe yakakosha kurudziro yekudyidzana pakati peHuiihai Holding Group neZongshen Group yekuziva mamiriro ekutanga mumadokero ekumadokero epamusika kutengesa Chongqing Zongshen Vehicle Kambani uye kuwana chinzvimbo chinotungamira mune mini mota inogadzira indasitiri munzvimbo ino.
Iyo Huaihai Holding Group yakaisa mari yakakura kuti iwane iyo yaimbova Navy 4813 Equipment Kambani, ichigadzira iyo yenyika level kugadzira hofori, Huaihai Mechanic & Electronic Technology Co, Ltd, iyo inoratidza kutanga kweyekambani yezvikamu zvakakosha bhizinesi.
Mubatanidzwa Wenyika Dzepasi Pose wakagadzwa pamberi pemaindasitiri nehurongwa hweRudzi rweBelt uye Mugwagwa kudzamisa misika yemhiri kwemakungwa, kuparadzira zvigadzirwa zvinopisa zvinotengesa pasi rese kuti ivake hwaro hwakasimba hwekufambira mberi nekusimudzira bhizinesi reboka.
＄ mamirioni makumi mana emadhora akaiswa kuti awane Hongan New Energy Auto Co, Ltd, ichikwira iro bhizinesi kubva kumota yehupfumi kuenda kune yakasarudzika vehiles, ichivandudza bhizinesi rekusimudzira kambani iyi kuti ive nekukurumidza uye hutano.
Muna 2018, gore roga roga rekutumira vhoriyamu rakawedzera ne 70%, shandira kupfuura 70% yehuwandu hwepasi rese, chinzvimbo chekutanga muindasitiri.
Huaihai-Zongshen Industrial Park, Ehupfumi uye Technology Nzvimbo Dzekusimudzira yeXuzhou, Jiangsu, China